Xulka South Africa oo iska xaadiriyay siddeed dhamaadka koobka qarammada Afrika, kaddib markii ay reebeen marti-geliyeyaasha tartanka ee Masar … + SAWIRRO – Gool FM
(Qahira) 06 Luulyo 2019. Xulka qaranka South Africa ayaa iska xaadiriyey wareegga siddeed dhammaadka koobka qammada qaaradda Afrika 2019, kaddib markii ay garaaceen xulkii marti-gelinayey tartanka sanadkan ee Masar.
South Africa ayaa xulka Egypt uga adkaaday gool ay xilli dambe ka dhaliyeen, iyadoo kulanku ku adkaaday 1-0 looga badiyey Masar.
Kulankan oo ka dhacay garoonka Cairo International Stadium ayaa ahaa mid aad u adag, hase yeeshee waxaa 1-0 looga badiyay Masaarida oo iyagoo gurigooda jooga isaga haray tartanka qammada qaaradda Afrika.
Qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa dhammaadkeedii waxaa goolka qura ee looga adkaaday Masar u dhaliyey xulka South Afrika ciyaaryahan Thembinkosi Lorch 85’daqiiqo kaddib caawin uu ka helay Lebo Mothiba.
Berri oo Axad ahna waxaa dheeli doona; Madagascar v DR Congo iyo Algeria v Guinea.